Visa-ka Turkiga ee Qatar: hage gaaban - ALinks
Uma baahnid fiiso dalxiis oo muddo gaaban aad ku joogtid Turkiga adigoo haysta dhalashada Qatar. Si fudud ayaad ugu safri kartaa Turkiga, dalxiis, ama ganacsi, wadar ahaan muddo dhan 180 maalmood, laakiin dhab ahaan ma joogi kartid waddanka in ka badan 90 maalmood. Haddii aad u baahan tahay taageero dheeri ah si aad u hubiso dukumiintiyada aad ugu baahan tahay inaad ugu safarto Turkiga dhalasho ahaan Qatar waxaad sidoo kale isticmaali kartaa adeegga fiisaha sida iisa or VisaHQ.
Sidee looga helaa fiisaha Turkiga ee Qatar?
Haddii aad haysato baasaboor Qatar ah, uma baahnid fiiso. Dadka reer Qatar ayaa u safri kara Turkiga muddo dhan 180 maalmood laga bilaabo maalinta ugu horreysa ee aad timaado Turkiga, laakiin dhab ahaan ma joogi kartid dalka in ka badan 90 maalmood.
Midna maxaa yeelay uma baahnid fiiso baasaboor Qatar ah. Weli, haddii aad rabto qof inuu hubiyo inaad haysato dhammaan dukumiintiyada lagama maarmaanka u ah inuu soo galo Turkiga waa inaad la xiriirtaa iisa jawaab deg deg ah.
Haddii aad ubaahan tahay caawimaad shaqsi ahaaneed oo dhakhso leh dukumiintiyada aad ugu baahan tahay Turkiga, waxaad u mari kartaa adeeg la isku halleyn karo, sida iisa.
Weydiiso caawimaad dheeraad ah muwaadiniinta Qatar ee iVisa
Waxaad tagi kartaa Nidaamka Codsiga Fiisaha elektarooniga ah ee Jamhuuriyadda Turkiga si loo hubiyo in muwaadiniinta Qatar aysan u baahnayn fiiso Turkiga ah.
Immisa ayey fiiso u tahay Turkiga reer Qatar?
Waa lacag la’aan, iyada oo aan fiisayaasha fiisaha lagu bixin karin baasaboorrada Kuwaiti.
Muwaadiniinta Qatar ma heli karaan fiiso markay yimaadaan Turkiga?
HAA, maadaama aadan u baahnayn fiiso laakiin waxaad ku shaabadeyn doontaa baasaboorkaaga markaad gasho Turkiga. Dadka reer Qatar ayaa u safri kara Turkiga muddo dhan 180 maalmood laga bilaabo maalinta ugu horreysa ee aad timaado Turkiga, laakiin dhab ahaan ma joogi kartid dalka in ka badan 90 maalmood.
Sawirka kore ee kore waa Eminönü İskele, Turkey. Sawir Osman Köycü on Aadaabta.
Ma Raadinaysaa Hoteello raqiis ah oo ku yaal Istanbul?
Fiisaha New Zealand ee Hindida